समाचार - इतिहासको दोहोरिनबाट जोगिन स्पेनमा नयाँ कोरोनाभाइरस म्युटेटेड। बेलायत, फ्रान्स, इटाली र जर्मनीले फेरि नाकाबन्दी नीति खोले
नयाँ कोरोनाभाइरस स्पेन मा परिवर्तित
टिलोसका अनुसार हेलोवीन मौसमको बेला बेलायतले अर्को हप्ता संसदमा मतदान गर्ने छ। महामारीको प्रकोपका कारण बेलायतले फेरि राष्ट्रिय नाकाबन्दीमा प्रवेश गर्ने छनौट हुन अघि नै डिसेम्बरको शुरुवात हुने अपेक्षा राखिएको छ। यो जर्मनी, फ्रान्स र इटालीले लगातार नाकाबन्दी गरेपछि यो अर्को महत्त्वपूर्ण पश्चिमी देश हुनेछ। युरोपेली देशहरूको चिन्ताको मुख्य कारण यो हो कि विश्वमा in 46% नयाँ पुष्टि भएका घटनाहरू गत हप्ता युरोपबाट आएका थिए र मृत्युको एक तिहाइ युरोपबाट आएका थिए। वैज्ञानिक रिपोर्टका अनुसार युरोपमा अधिकांश नयाँ कोरोनाभाइरसका केसहरू वास्तवमा उत्परिवर्तित कोरोनाभाइरसबाट आएका हुन्। यो भाइरस सिधा स्पेनमा उदाएको हुन सक्छ, जुन नयाँ कोरोनाभाइरसलाई युरोपमा नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण पनि हो र मृत्यु दर पनि धेरै हो!
इतिहास दोहोरिने डर
नयाँ ताजको महामारीले धेरै मानिसहरूलाई आधुनिक मानव इतिहासमा स्पेनिश फ्लूको प्रकोपको सम्झना गराउँदछ। त्यसबेला, स्पेनिश फ्लूको जन्म अमेरिकी फार्महरूमा भयो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले पहिलो विश्वयुद्धमा भाग लिन युरोपमा सैनिक पठाएपछि यसले स्पेनी फ्लू भाइरस पनि ल्यायो। जब हामी युरोपमा आईपुग्यौं, बेलायत, फ्रान्स र जर्मनी जस्ता प्रथम विश्वयुद्धमा भाग लिने देशहरूले फ्रन्टको मनोबल विनाश हुनबाट फ्लूलाई रोक्नको लागि लुकाउने विधि अपनाए। यद्यपि पहिलो विश्वयुद्धमा तटस्थ देश स्पेनले फ्लूबाट मर्नेको स broadcast्ख्या प्रसारण गरिरहेको छ। आठ लाख मानिस फ्लूबाट संक्रमित भएका थिए, त्यसैले अन्तत: यसलाई स्पेनी फ्लूको रूपमा वर्गीकृत गरियो। स्पेनिस फ्लूको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको यो छ कि उत्परिवर्तनको दोस्रो लहर पछि, स्पेनिश फ्लू अझ उग्र छ। युवा र मध्यम आयु वर्गका मानिसहरु मर्ने संख्या बहुमत थियो। पहिलो विश्वयुद्धमा १० करोडको मृत्युसँग तुलना गर्दा, स्पेनिश फ्लूले हुने मृत्युको संख्या 50 करोड थियो। Million १० करोड मानिस। यसपटक युरोपमा नयाँ क्राउन भाइरस बिग्रेको छ, स्पेन पनि सबैभन्दा कडा हिट क्षेत्र हो, र उत्परिवर्तन भएको भाइरस पनि स्पेनमा पुष्टि भएको छ, ऐतिहासिक पाठहरू सहित, त्यसैले युरोपेली देशहरू आफूलाई इतिहास दोहोर्याउँछन् भनेर डराउँछन्, त्यसैले तिनीहरू बढी सतर्क देखिन्छन्। नयाँ मुकुट महामारीको दोस्रो छालसँग कारोबार गर्दै, कुनै पनि देश र वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ताहरूले नयाँ कोरोनाभाइरससँग लड्न बथानको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रयोगको सिफारिश गर्दैनन्।
स्प्यानिश इन्फ्लूएन्जाको तीन छालहरूको डाटा तुलना
नयाँ कोरोनाभाइरसको बारेमा मानव सचेतना अनुभव गरे पछि, वर्तमान मानव बायोमेडिकल टेक्नोलोजी सयौं वर्ष पहिले लोकप्रिय स्पेनी फ्लू भन्दा धेरै शक्तिशाली छ, नयाँ कोरोनाभाइरस को एक वर्ष को समझ पछि, यो लुकेको र asymptomatic बीच छ नयाँ कोरोनाभाइरसको प्रकृति अनुपात अनुसार नयाँ कोरोनाभाइरसको फैलावट अझ शक्तिशाली छ, र एक रूसी अनुसन्धानकर्ताले पनि आफूलाई नयाँ कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित गर्‍यो, जसले यो पुष्टि गर्दछ कि नयाँ कोरोनाभाइरस दुई वा तीन पटक संक्रमित हुन सक्छ, जसले यो पनि देखाउँदछ कि खोप धेरै प्रभावकारी छ, र स्पेनिश फ्लू पहिलो हो। चरण १ 18 १ of को वसन्त occurredतुमा देखा पर्‍यो, र यो सामान्यतया थोरै प्रभावको साथ साधारण इन्फ्लूएन्जा थियो, र त्यसपछि छोटो रूपमा हराइयो। सब भन्दा प्रभावकारी स्पेनिश फ्लूको दोस्रो छाल हो जुन १ 18 १। को पतनमा आएको थियो। यो सबैभन्दा बढी मृत्यु दरको साथ छाल थियो। त्यस समयमा इन्फ्लूएन्जा भाइरस मानव प्रतिरक्षा प्रणालीको माध्यमबाट फुटे र स्पेनी फ्लू फेरि raging गर्न। सफलता पूरा भएमा अधिक भाइरस भाइरसको उदय हुनेछ। मानव प्रतिरक्षा प्रणालीले स्पेनी फ्लुको दोस्रो छाललाई अनुकूलन गर्ने बित्तिकै, एक बर्ष पछि, इन्फ्लूएन्जाको तेस्रो छाल १ 19 १ of को जाडोमा देखा पर्‍यो, र स्पेनिश फ्लूको तेस्रो छाल बिचको तरंग १ र दुई दुई बीचको मृत्युदर हो!
तसर्थ, नयाँ मुकुटको महामारी चीनमा प्रभावकारी रूपमा दबाइएको छ, तर यसलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। जे होस्, ऐनाको रूपमा इतिहासको साथ, स्पेनिश फ्लू महामारीको इतिहासको लागि उत्तम पाठ्यपुस्तक हो!